ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများစားသုံးမှု၏သဘောထားနှင့်အန္တရာယ်အချက်များ - စူးစမ်းလေ့လာမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှု (၂၀၁၈) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌လှုပ်ရှားမှု
အယ်လ် Mamun MA, SM Yasir အာရာဖတ်, Mst Ambiatunnahar နှင့်မာကုဃ Griffiths က။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စွဲမှု၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်: 1-13 ။
ညစ်ညမ်းကျယ်ကျယ်, ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဝေလျက်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖျော်ဖြေရေးတစ်ခုအလယ်အလတ်အဖြစ်အသုံးပြုပေမယ့်နည်းနည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အတွက်ကိုလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုသဘောထားများနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအန္တရာယ်အချက်များဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကစစ်တမ်း Jahangirnagar တက္ကသိုလ် (ဒါကာ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်) မှာ 313 ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများကိုကြားတွင်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကျောင်းသား 72% အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်မိမိတို့၏တစ်ခုလုံးကိုဘဝအတွင်းညစ်ညမ်းစားသုံးကြောင်းတွေ့ရှိရ, သူတို့၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ထက်ဝက်ရံဖန်ရံခါစားသုံးသူခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသမီးပုံမှန်အားဖြင့်အများကြီးနောက်ပိုင်းမှာညစ်ညမ်းကြုံတွေ့ပေမယ့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်သုံးပုံနှစ်ပုံ (67%), အထက်တန်းစဉ်အတွင်းညစ်ညမ်းကြုံတွေ့။ Logistic ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုထိုကဲ့သို့သောသုံးပြီးအဖြစ် (အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်, တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်း, တစ်ဦးကျေးလက်ဒေသတွင်နေထိုင်, အထီးဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ခန့်မှန်းခဲ့ကွောငျးတငျပွခဲ့သ Facebook က), နှင့်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်။ နောက်ထပ်သုတေသနနောက်ထပ်အမူအကျင့်ပုံစံများနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကျောင်းသားများအကြားညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းဆက်စပ်အချက်များဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု ညစ်ညမ်းသဘောထားများ ကျောင်းသားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လိင်
MA အယ်လ် Mamun နှင့် SM Yasir အာရာဖတ်ကဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အညီအမျှလှူဒါန်းခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းကျယ်ကျယ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေလျက်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖျော်ဖြေရေးတစ် medium အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါဝေါဟာရကို "ညစ်ညမ်း" တချို့တစ်ဦးချင်းစီ, ထိုးစစ်ရိုင်းစိုင်းနှင့်အကျင့်ပျက်ကိုရှာဖွေရသောရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် / သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ပုံနှိပ်သို့မဟုတ်အမြင်အာရုံ form မှာစိတ်ကူးယဉ်ဒရာမာအဖြစ်ရည်ညွှန်းထားသည်နှင့်အဓိကအားဖြင့်လိင်ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုနှိုးဆှဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ် နှင့် (ရေလွှမ်းမိုးခေါ်ဆောင်သွားအလိုဆန္ဒဖျော်ဖြေသို့မဟုတ်နှိုးဆှဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ် 2007; Malamuth 2001; Mosher 1988) ။ အလားတူပင်မော်ဂန် (2011) စာဖြင့်ရေးသားရုပ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, မှာရှာဖွေနေနှင့် / သို့မဟုတ်အသံပစ္စည်းအဝတ်အချည်းစည်းကလူပုံအဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိညစ်ညမ်းစားသုံးသတ်မှတ်လိင်ပုံဖော်နှင့် / သို့မဟုတ်လူတွေကိုလိင်သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမြားတှငျပါဝငျခွငျး။
ညစ်ညမ်း (ဆိုလိုသည်မှာ, ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု) မှထိတွေ့မှု၏ပြဿနာထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာများစွာသောသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့သည်။ လေ့လာရေးတသမတ်တည်း (အထီးတက်ကြွစွာအမျိုးသမီးထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများထွက်ရှာကြည့်ရှုဖို့ကပိုများပါတယ်ကြောင်း Bleakley et al ပြသခဲ့ကြသည်။ 2011; ဘရောင်းနှင့်သည် L'Engle 2009; Lim က et al ။ 2017; ပေတရုနှင့် Valkenburg 2006; Regnerus et al ။ 2016; Rissel et al ။ 2017; Shek နှင့်မာရင်းကျို 2016) ။ ဒါဟာယောက်ျားကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောသူတို့၏ဘုံအပြုအမူကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်နှင့် Impulse (ချောင်ဒရီ et al ကဲ့သို့သောအကြောင်းရင်းများပုံမှန်ညစ်ညမ်းစားသုံးသူဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 2018) ။ ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းပိုလက်လှမ်းတတ်နိုင်နှင့်အမည်မသိ (Cooper ကဖန်ဆင်းတော်မူပြီဖြစ်သောကြောင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကိုလည်းအင်တာနက်၏ရလဒ်အဖြစ်တိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ် 1998; Owen et al ။ 2012) ။ မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေ (ဥပမာ, စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်, etc) ၏တိုးမြှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုသုံးပြီး, မိတ်ဆွေများ (ဥပမာအတူအပြန်အလှန်နည်းလမ်းသစ်တွေကိုလည်းဦးဆောင်ထားပါတယ် Facebook က) နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဂီတ (စမတ်ဖုန်းကနေတဆင့်, MP3 ကစားသမား) ကိုနားထောင်ခြင်းနှင့် Stream ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြား boxsets စောင့်ကြည့်ကဲ့သို့သောအခြားအပြုအမူတွေ (ဥပမာမြားတှငျပါဝငျခွငျး Netflix နဲ့) ။ ဤအသစ်ကိုမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်နှင့်အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်နည်းလမ်းသစ်တွေများအသုံးပြုမှုတွင်လည်းညစ်ညမ်း၏တိုးမြှင့်စားသုံးမှုအတွက်အချက်များဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ညစ်ညမ်းပထမဦးဆုံး (ဆိုလိုသည်မှာငယ်စဉ်ကလေးဘဝ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်, လူကြီး), တစ်ဦးချင်းစီအသက်ရှင်နေထိုင်ရှိရာ (ဥပမာ, မြို့ပြသို့မဟုတ်ကျေးလက်ဒေသ), သက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်ဦးစားပေးညစ်ညမ်းအမျိုးအစား (ဥပမာ, ဗီဒီယိုများ, ဓာတ်ပုံများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြုံတွေ့သောအခါကတခြားညစ်ညမ်းစားသုံးမှု-related အချက်များပါဝင်သည် ပုံပြင်များ) (Braithwaite et al ။ 2015; ကာရိုး et al ။ 2008; ချောင်ဒရီ et al ။ 2018; Sørensenနှင့်Kjørholt 2007).
ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုပါဝင်ပတ်သက်အဆိုပါအကြောင်းပြချက်များနှင့်အချက်ပေါင်းစုံဖြစ်ကြပြီးလိင်စသည်တို့ကိုနှင့် / သို့မဟုတ် masturbatory ရည်ရွယ်ချက်များအဘို့, သိချင်စိတ်အဘို့, သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအဘို့, ခံစားချက်တိုးတက်အောင်ဘို့နှင့်ကျေနပ်စရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်များအတွက်နှိုးဆော်ခြင်းခံရဖို့လိုပါဝင်သည် (Boies 2002; Mattebo et al ။ 2014; Merrick et al ။ 2013; ပေါလုနှင့်ရှိန်းပြား 2008) ။ ညစ်ညမ်းကိုလည်းဦးတည်သဘောထားတွေပုံဖော်နိုင်ပြီးတစ်ဦးချင်းစီ '' နေ့စဉ်ဘဝနှင့်ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုများ (ဥပမာပက်တာနှင့်စျေးနှုန်းကိုထိခိုကျနိုငျသုံးစွဲခြင်း 2012; ပယ်ရီ 2015, 2016, 2017) ။ ဒါဟာအစ Lo နှင့်ဝေ (ညစ်ညမ်းအဆိုးအသိုင်းအဝိုင်းကိုယ်ကျင့်တရားအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်ကိုအခိုင်အမာထားပြီး 2005; Mattebo et al ။ 2014), ထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏ကြိမ်နှုန်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို၏တားစီးနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာပြိုကွဲ (ရေလွှမ်းမိုးအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီ '' လိင်ဘဝတွေကိုရန်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ပေါ်စေ 2009; Hald နှင့် Malamuth 2008; Maddox et al ။ 2011; ပေါလုနှင့်ရှိန်းပြား 2008; Poulsen et al ။ 2013).
ဘင်္ဂလားဒေ့ (ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်ရှိရာ) ခုနှစ်တွင်တိုင်းပြည်၏ကျန်းမာရေးချို့တဲ့စာတတ်မြောက်ရေးနှင့်လိင်ရှိပါတယ်ကြောင့်၎င်း၏လူမှုယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘာသာရေးပတ်ဝန်းကျင် (Ahsan et al ဖို့လျှို့ဝှက်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ 2016; အာရာဖတ် 2017; အာရာဖတ် et al ။ 2018) ။ လိင်အများပြည်သူတှငျဆှေးနှေးသောခေါင်းစဉ်မရှိ, အသိပညာဆင်းရဲ, လူဦးရေ (Ahsan et al အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအထငျမှားဖြန့်ဖြူးဖို့အထောက်အကူပြုတဲ့သူတိုင်းရင်းဆေးဆရာများအားဖြင့်အားဖြည့်။ 2016; အာရာဖတ် 2017) ။ ယနေ့အထိ, လိင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာ၏အရည်အသွေးကိုဦးတည်သဘောထားတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုရည်မှတ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အတွက်သုတေသနတစ်ခုစာခေါငျးပါးရှိပါသည်။ ချောင်ဒရီ et al နေဖြင့်မကြာသေးမီကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လေ့လာမှု။ (2018) အသက် ၂၀ မှ ၂၅ နှစ်အကြားရှိအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းမှာအမျိုးသားများတွင် ၅၄% နှင့်အမျိုးသမီးများသည် ၁၂.၅% ဖြစ်သည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင်သုတေသနမရှိခြင်းကြောင့်ယခုလေ့လာမှုတွင်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်သူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုအပေါ်သူတို့၏သဘောထားနှင့်သဘောထားတို့ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများစားသုံးမှုအတွက်အန္တရာယ်အချက်များ၊ ကျား၊ မ၊ နေထိုင်ရာနေရာ၊ ဆက်ဆံရေးအခြေအနေ၊
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှမေလအထိ Jahangirnagar တက္ကသိုလ် (Dhaka, Bangladesh) တွင်ပထမနှစ်ကျောင်းသားများအကြားအော့ဖ်လိုင်း ("ဘောပင်နှင့်စက္ကူ") စစ်တမ်းကိုတက္ကသိုလ်ခန်းမများ၌ကျောင်းသား ၅၀၀ သို့ချဉ်းကပ်ခဲ့သည်။ နေထိုင်မှုနေရာထိုင်ခင်း) နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောစစ်တမ်းများကိုကျောင်းသား ၃၁၃ ဦး (၆၂.၆% တုံ့ပြန်မှုနှုန်း) မှကောက်ယူခဲ့သည်။ စစ်တမ်းတွင်အပိုင်း (၃) ပိုင်းပါ ၀ င်သည် - (၁) လူမှု - လူ ဦး ရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်၊ (၂) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားအမြင်နှင့် (၃) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအပေါ်ထားရှိသောသဘောထား။ စစ်တမ်းသည်တံခါးပိတ်မေးခွန်းများပါ ၀ င်ပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြာသည်။
အဆိုပါစစ်တမ်းကိုယခင်သုတေသန (ဥပမာ Braithwaite et al ၏တွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီးရေးဆွဲခဲ့သည်။ 2015; ဘရောင်းနှင့်သည် L'Engle 2009; ကာရိုး et al ။ 2008; ချောင်ဒရီ et al ။ 2018; Sørensenနှင့်Kjørholt 2007) ။ အဆိုပါမေးခွန်းများကိုသုတေသနအဖွဲ့ကကြံစည်ခဲ့ပြီး pretesting ကနေလေ့လာတွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတတ်နိုင်သမျှရိုးရှင်းသောထားရှိမည်ခဲ့ကြသည်။ မေးခွန်းလွှာကိုလည်း "? ဘယ်သူကပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်းရန်သင့်အားမိတ်ဆက်" ပါဝင်သည် "သင်ညစ်ညမ်း၏အဘယျ type ကိုပျော်မွေ့သလဲ?", "အဘယ်ကြောင့်သင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုကြတာလဲ?", "သင်ဘယ်လိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအပြီးခံစားရသလဲ" နှင့် "အဘယျသို့လျှင် (ခြေလှမ်း မဆို) ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ရှောင်ကြဉ်ရန်ခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်? "ယခင်စာပေအပေါ်အခြေခံပြီးပြုလုပ်အများအပြားအချက်များကျား, မ, နေအိမ်သို့ဧရိယာ, ကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေ, နှစ်သက်အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအပါအဝင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအထောက်အကူပြုစေမည်အကြောင်းတွေးဆခဲ့သည်။ အဆိုပါစစ်တမ်းကိုလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်အတူသင်တန်းသားများကို '' ကြားဆက်ဆံရေးဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အမြင်မေးခွန်းများကို (ညစ်ညမ်း "ကောင်းသော" နှင့် "မကောင်းတဲ့" အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်ရှိမရှိ၏အခြေခံပေါ်မှာထုတ်ပြန်ချက်များ) ပါဝင်သည်။
ဒေတာကိုလူမှုရေးသိပ္ပံ (SPSS) ဗားရှင်း 22.0 နှင့် Microsoft Excel ကို 2016 များအတွက်စာရင်းအင်း Package ကိုသုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ပြရန်စာရင်းဇယားများနှင့်ပထမဦးဆုံးယူမှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ SPSS 22.0 နှင့်အတူ (ဥပမာကြိမ်နှုန်း, ရာခိုင်နှုန်း, နည်းလမ်းနှင့် chi-စတုရန်းစမ်းသပ်မှု) ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အားလုံး variable တွေကိုထို့နောက်မှီခို variable ကိုအဖြစ်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အတူတစ်ဦး binary Logistic ဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်သို့ဝငျခဲ့သညျ bivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်သိသာထင်ရှားသောတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Logistic ဆုတ်ယုတ်၏ရလဒ်များကို 95% ယုံကြည်မှုကြားကာလနှင့်အတူ unadjusted အဖြစ်အစီရင်ခံရသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ပညာပေး၏သုတေသနအဖွဲ့ရဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့ဦးစီးဌာန၏ Ethical ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကော်မတီကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒေတာကိုအမည်ဝှက်စုဆောင်းခဲ့ကြနှင့်အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းစတင်မတိုင်မီအကြောင်းကြားရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်သင်တန်းသားများထံမှသိမ်းယူခဲ့သည်။ အားလုံးပါဝင်သူများ, လေ့လာမှု၏ (ဈ) သဘာဝနှင့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးငြင်းဆန်ရန် (ii) လေ့လာမှု၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, (iii) ခွင့်နှင့်လေ့လာမှုမှာပါဝင်ကနေဆုတ်ခွာဖို့ (ဃ) ညာဘက်အကြောင်းကြားခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသားများကိုလေ့လာမှုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပြီးထံမှမဆိုဘဏ္ဍာရေးအကျိုးကျေးဇူးရရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒေတာနှင့်သင်တန်းသားများကိုအမည်မဖော်လိုလျှို့ဝှက်ချက်များရဖို့သေချာခဲ့သည်။
ပါဝင်သူများ၏ပျမ်းမျှအသက်မှာ ၁၉.၆၈ နှစ် (± ၀.၉၄) ဖြစ်ပြီး ၁၈ နှစ်မှ ၂၃ နှစ်အတွင်း၊ အမျိုးသား ၆၉% ပါဝင်သည်။ သင်တန်းသား ၅၇.၈% သည်လတ်တလောအချစ်ဇာတ်လမ်းများမရင်းနှီးကြပါ (ဇယားကိုကြည့်ပါ) 1 ) လူမှုလူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အဘို့။ အဘယ်ကြောင့် "ညစ်ညမ်းမကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်" (စားပွဲတင်၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်နှင့် ပတ်သက်. 2), သင်တန်းသားများကိုကဘာသာရေးအခြေခံမူ (62%) ကိုချိုးဖောက်နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ (62%) ရာထူးတိုးကြောင်းကို, (57.5%) ထိုးစစ်နှင့်စော်ကားသောကြောင့်ဖော်ပြခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့် "ညစ်ညမ်းသည်ကောင်း" (စားပွဲတင်စပ်လျဉ်း 2), သင်တန်းသားများ, အစားလိင်ဆက်ဆံခြင်း (31%) ရှိခြင်းထက် masturbate မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုနိုင်သောအရာတစ်ခုခုကြောင့်ဖော်ပြထားလိင် (19.5%) အကြောင်းပိုမိုပွင့်လင်းသဘောထားတွေဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြများနှင့်သမားရိုးကျမဟုတ်သောသို့မဟုတ်အခြားပုဂ္ဂလိကစိတ်ကူးယဉ်များအတွက်အန္တရာယ်ကင်းထွက်ပေါက်ပေးထားနိုင်ပါတယ် (19%) ။ ရလဒ်များလည်းသင်တန်းသားများ၏ 72% ဟာသူတို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုဘဝ (စားပွဲတင်အတွက်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ညစ်ညမ်းကျွမ်းလောင်ခဲ့ကြောင်းပြသ 3) ။ ရွယ်တူချင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုညစ်ညမ်းစားသုံးမှု (34.5%) ၏အများဆုံးအစီရင်ခံအကြောင်းမရှိ, အသင်တန်းသားများ၏ 67% အထက်တန်းကျောင်းအဆင့်မှာညစ်ညမ်း၎င်းတို့၏ကနဦးရင်ဆိုင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုခန့်မှန်းခြေတဝက်ကာလအတွင်းသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်း (51%) ကိုကြည့်ပြီးနောက် masturbated နှင့်ညစ်ညမ်း၏အရှိဆုံးနှစ်သက်သောအမျိုးအစားဗီဒီယိုကြည့်ခဲ့သည် (ဇယား 3) ။ self-rated ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုပြင်းပြင်းထန်ထန် (ကျား, မအတူဆက်စပ်ခဲ့သည်p <0.001) ယောက်ျားနှင့်အတူညစ်ညမ်း၌ပါဝငျအမျိုးသမီးများထက် 12 ဆ (ဇယား။ ) 4).
ဖြေဆိုသူ၏လူမှုလူဦးရေအချိုးအစား variable တွေကိုဖြန့်ဖြူး
ပုံစံ (လူနေအိမ်ဧရိယာ) Come
s ကိုအဓမ္မပြုကျင့်မှုအပါအဝင်ကျူးလွန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများ, သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သလား
မကောင်းတဲ့အနေဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွား (ဥပမာလိင်စွဲ) ကိုဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သ
မူလတန်းကျောင်း (၆-၁၂ နှစ်)
အထက်တန်းကျောင်း (၁၃-၁၇ နှစ်)
တက္ကသိုလ် (ဟောင်းကိုပိုမိုနှစ် 18)
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့မှုအကြိမ် (နောက်ဆုံး ၁၅ ရက်)
ငါနောက်ဆုံး 15 ရက်အတွင်း porn ကိုမသုံးခဲ့ပါဘူး
လေ့လာမှု / အလုပ်မြားတှငျပါဝငျခွငျး
ညစ်ညမ်းဆိုဒ်များ offed ရပါမည်
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အတူအချက်အပေါငျးအသငျးမြား၏ Logistic ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
& Odds အချိုး (95% ယုံကြည်မှုကြားကာလ)
(လူနေအိမ်ဧရိယာ) မှ Come
ရည်းစား / ရည်းစားနှင့်အတူ relationship
အသုံးပြုခြင်း Facebook က
မကောင်းတဲ့အဖြစ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. အမြင်
ကောင်းသောအဖြစ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. အမြင်
(; 12.66-95 7.05% CI OR = 22.74) အလားတူပဲ, ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကနေရလဒ်တွေကိုအထီးညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏ခန့်မှန်းခဲ့ခံနေရကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ကျေးလက်ဒေသ (; 1.93% CI OR = 95: 1.17-3.20) မှကျောင်းသားများနှင့်ဆက်ဆံရေးအတွက်စေ့စပ်သောသူတို့အား (OR = 1.87; 95% CI 1.07-3.29) ကိုလည်းညစ်ညမ်းစားသုံးမှုခန့်မှန်းအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဝါသနာတွေထဲမှာသုံးပြီး Facebook က (OR = 2.06; 95% CI: 1.25-3.41) နှင့်ရုပ်ရှင်ကြည့် (OR = 2.122; 95% CI 1.28-3.52) ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအင်အားအကောင်းဆုံးခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။ ညစ်ညမ်း၏အနုတ်လက္ခဏာသဘောထားအမြင်စပ်လျဉ်းများတွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမြှင့်တင် (ဈ) အဖြစ်ညစ်ညမ်းသိနေဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည် (OR = 4.86; 95% CI 2.86-8.37), (ii) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး (OR = 3.02 ထိခိုက်; 95% CI 1.75- 5.20) နှင့် (iii) ဆန့်ကျင်ဘက်လိင် (OR = 1.57 ဆီသို့ဦးတည်အနုတ်လက္ခဏာသဘောထားရှိခြင်း, 95% CI 0.94-2.63) ။ ညစ်ညမ်း၏အပြုသဘောဆောင်သည့်သဘောထားအမြင်စပ်လျဉ်းများတွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု (ဈ) အစားလိင်ဆက်ဆံခြင်း၏တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေတဆင့်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်အဖြစ်ညစ်ညမ်းသိနေဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည် (OR = 4.32; 95% CI 2.17-8.59), (ii) အနုပညာတစ်လူမှုရေးအရအကျိုးရှိသောပုံစံဖြစ်ခြင်း Self-expression ကို (OR = 4.077; 95% CI 1.56-10.66), (iii) တစ်ဦးအန္တရာယ်ကင်းသမားရိုးကျမဟုတ်သောသို့မဟုတ်အခြားပုဂ္ဂလိကစိတ်ကူးယဉ်များအတွက်ထွက်ပေါက်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ (OR = 2.96; 95% CI 1.34-6.54) နှင့် (ဃ) ကိုပိုပြီးပွင့်လင်းဖို့ဦးဆောင် လိင်နှင့် ပတ်သက်. သဘောထားများ (OR = 2.31; 95% CI 1.11-4.79) ။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ဘွဲ့ကြိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားကသူတို့ရဲ့ဆက်စပ်နေသောအချက်များဆီသို့ဦးတည်စားသုံးမှုနှင့်သဘောထားများအကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များကျောင်းသားများကိုနီးပါးလေးပုံသုံးပုံဟာသူတို့ရဲ့တစ်သက်တာ (72%) အတွက်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ညစ်ညမ်းစားသုံးကြောင်းပြသခဲ့သည်။ Das; ခြုံငုံညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှုန်းမှာထို့ကြောင့်အိန္ဒိယ (80% ကနေလေ့လာမှုများအစီရင်ခံထက်လျော့နည်းခဲ့သည် 2013), ဆွီဒင် (98%; Donevan နှင့် Mattebo 2017) နှင့်သြစတြေးလျ (87%; Lim က et al ။ 2017), ဒါပေမယ့်ဘင်္ဂလားဒေ့အတွက်တဦးတည်းယခင်လေ့လာမှု (42% ထက် သာ. ကြီးမြတ်; ချောင်ဒရီ et al ။ 2018) ။ ဤရွေ့ကားမတူညီသောရလဒ်များကိုကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများ, စံဆုံးဖွယ်ရှိဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, နမူနာလေ့လာခဲ့သည်။ သည်အခြားလေ့လာမှုများကွဲပြားခြားနားသောလူဦးရေကိုအသုံးပြုသော်လည်းဥပမာအားဖြင့်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုဘွဲ့ကြိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများစုဆောင်း။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအတွက်နမူနာလည်းယခင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အတွက်လေ့လာမှုနဲ့ပိုပြီးကျေးလက်နေလူဦးရေရှိသူတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အင်တာနက်ကိုရယူသုံးနှင့်အတူ (ii) ကျွမ်းနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပို (ဈ) လက်လှမ်း, တတ်နိုင်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖူးဖို့ပိုဖွယ်ရှိသည်။
အင်တာနက်နည်းပညာကိုပိုလက်လှမ်းတတ်နိုင်နှင့်အမည်မသိဖြစ်လာသည်သောကြောင့်, (Griffiths က 2000; Owen et al ။ 2012), က Boies (စသည်တို့ကိုအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများ, အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ chatting အပါအဝင်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘာဝတရား၏အွန်လိုင်းပစ္စည်းကိုရယူသုံးတစ်ဦးချင်းစီ facilitated ထားပါတယ် 2002; Goodson et al ။ 2001; Griffiths က 2001; 2012; Shaughnessy et al ။ 2011; က Short et al ။ 2012) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာ Regression ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုသိသိသာသာသုံးပြီး, အွန်လိုင်းဝါသနာ (ဥပမာရှိခြင်းအပါအဝင်လှုပ်ရှားမှုများနံပါတ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကွောငျးတငျပွခဲ့သ Facebook က) နှင့်ရုပ်ရှင်များကိုကြည့်။ အွန်လိုင်းရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာညစ်ညမ်း၏အများဆုံးဦးစားပေးပုံစံခဲ့ကြောင်းပေးထားသောအဆိုပါတွေ့ရှိချက်အလိုလိုသိသဘာဝကျပါတယ်။
အဆိုပါဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ မှစ. ရလဒ်များကိုမူလကဘင်္ဂလားဒေ့အတွက်ကျေးလက်ဒေသများမှကျောင်းသားများအတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ (ချောင်ဒရီ et al အတွက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအပေါ်ယခင်လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်ကနေပြောင်းပြန်ဖြစ်သော, မြို့ပြဒေသများရှိသူများအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းလောင်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ 2018) ။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုလည်း, တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်စာရေးဆရာ '' အသိပညာရှေ့မှာအစီရင်ခံတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေမယ့်တွေ့ရှိချက်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။ သုတေသနနောက်ထပ်ဒီညစ်ညမ်းစားသုံးမှုသည်အခြားအန္တရာယ်အချက်များတည်ထောင်ရန်ဤလူဦးရေဆိုင်ရာအချက်များဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆပိုမိုအထီးကျောင်းသားများကိုလိင်အမျိုးသမီးထက်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းများကိုလောင်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအထီးယူအက်စ်အေ (Bleakley et al အတွက်ယခင်လေ့လာမှုများကနေရလဒ်တွေကိုအလားတူအမျိုးသမီးထက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ 12 ဆပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ 2011; ဘရောင်းနှင့်သည် L'Engle 2009; Regnerus et al ။ 2016), နယ်သာလန် (ပေတရုနှင့် Valkenburg 2006), ဟောင်ကောင် (Shek နှင့်မာရင်းကျို 2012, 2016), ထိုင်ဝမ် (Lo et al ။ 1999), ဆွီဒင် (Häggström-Nordin et al ။ 2006) နှင့်သြစတြေးလျ (Lim က et al ။ 2017; Rissel et al ။ 2017) ။ အမျိုးသားများအတွက်ကြောင့်ဘုံအပြုအမူကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည် (ချောင်ဒရီ et al မှညစ်ညမ်း၏တက်ကြွသောစားသုံးသူဖြစ်ကြသည်။ 2018), ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုပေမယ့်ရလဒ်တွေကိုကာရိုး et al (တခြားနေရာမှတ်ချက်ပြုထားသည်အဖြစ်အချို့သောမိန်းမတို့သည်ညစ်ညမ်း၏ရံဖန်ရံခါအသုံးပြုသူများသည်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ 2008) ။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ အပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်းတွင်အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်များစွာနည်းသော်လည်း၊ အမျိုးသမီးများသည်လွန်ခဲ့သော ၁၅ ရက်အတွင်းနာရီအရေအတွက်အရအမျိုးသားများထက်ပိုမိုကြည့်ရှုကြသည်။ ဤသည်မှာစာပေတွင်ယခင်ကဖော်ပြခြင်းမရှိသေးသောတွေ့ရှိချက်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အကောင်းဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှု (ဥပမာ - သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်း / အော်ဂဇင်) ကိုရောက်ရှိရန်အချိန်သည်အမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီးများထက်တိုတောင်းသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် (Huey et al ။ ) 1981).
တစ်ချိန်ကတစ်ပတ်လျှင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှုန်း (23%) Braithwaite et al ထက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရဲ့ (2015) နှစ်ခုလေ့လာမှုများ (10% ဒုတိယလေ့လာမှုအတွင်းပထမဆုံးလေ့လာမှုနှင့် 14% အတွက်) ဒါပေမဲ့ကာရိုး et al ။ ရဲ့လေ့လာမှုယောက်ျားအတွက် (27%, အမျိုးသမီးအတွက် 2%) နှင့် (Sørensenနှင့်Kjørholtရဲ့လေ့လာမှုအဖြစ် ပတ်သက်. တူညီသော 22 ထက်လျော့နည်း %) ။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်အကြိမ်အနည်းငယ်တစ်ပါတ် (19%) ပါဝငျ et al ကာရိုးထက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရဲ့ (2008) လေ့လာမှု (ယောက်ျားအတွက် 16%, အမျိုးသမီးအတွက် 0.8%), ဒါပေမယ့် Sorensen ထက်လျော့နည်းခြင်းနှင့်Kjørholtရဲ့လေ့လာမှု (22%) ။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်တစ်ချိန်က (3.7%) သို့မဟုတ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်နေ့ (3.2%) et al ကာရိုးထက်လျော့နည်းခဲ့သည်ပါဝငျ။ ရဲ့ (2008) တစ်နေ့တစ်ကြိမ်လေ့လာမှု (16%; နေ့ရက်ကာလ၌ 5.2% အကြိမ်ပေါင်းများစွာ) ဒါပေမယ့် Braithwaite ထက်ဆိုနိုင်သည် သာ. ကြီးမြတ် et al ရဲ့ (။2015) လေ့လာမှုများ (တစ်ချိန်ကတစ်နေ့ (2%), ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုမှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်နေ့ (2%); တစ်နေ့ (2%) တစ်ချိန်က, ဒုတိယလေ့လာမှုမှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်နေ့ (3%)) ။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်စေ့စပ်တဲ့ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေရှိခြင်းသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ထုတ်ရှာကြံထက်တစ်ဦးချင်းရဲ့အညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ပိုဖွယ်ရှိဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင်အင်တာနက်ကိုယခု (ညစ်ညမ်းစားသုံးအတွက် Boies အဓိကအခန်းကဏ္ဍပေမယ့် 2002; Cooper က 1998; Goodson et al ။ 2001; Griffiths က 2012; Shaughnessy et al ။ 2011; က Short et al ။ 2012), ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအတွက်သင်တန်းသားများကိုအင်တာနက်ထက်အခြားနည်းလမ်းများမှတဆင့်ကြောင့်လောင်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ညစ်ညမ်း (Bleakley et al ကြုံတွေ့ရဖို့အရှိဆုံးအားနည်းချက်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ 2011; Donevan နှင့် Mattebo 2017; Hald နှင့် Malamuth 2008; သည် L'Engle et al ။ 2006; Mattebo et al ။ 2014; ပေတရုနှင့် Valkenburg 2006; Sørensenနှင့်Kjørholt 2007); ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်ပါဝင်သူ (၆၇%) သည် (၁၃-၁၇ နှစ်) အထက်တန်းကျောင်းတွင်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ရသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ သို့သော်အမျိုးသမီးများသည်အထက်တန်းကျောင်းကဲ့သို့တက္ကသိုလ်တွင်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုပထမ ဦး စွာတွေ့ကြုံနိုင်ဖွယ်ရှိသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများအမျိုးအစားများကိုမဂ္ဂဇင်းများ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့်ယခင်သုတေသနနှင့်ကိုက်ညီမှုများအပါအဝင်အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းနှစ်ခုလုံးတွင်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ 2011) ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကျောင်းသားများကိုအခြားနိုင်ငံများမှ (Griffiths ကထက်အင်တာနက်အပေါ်လျော့နည်းညစ်ညမ်းဝင်ရောက်ဖို့ပေါ်လာပေမယ့် 2012) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာပါဝင်သူများကညစ်ညမ်း၏ဆုံးဦးစားပေးပုံစံ USA တွင်ကောက်ယူလေ့လာမှုတစ်ခုထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်အရာညစ်ညမ်းဗွီဒီယိုများ (41%) စောင့်ကြည့်ခဲ့သည် (အထီး 36%; အမျိုးသမီး 24%) (ဘရောင်းနဲ့သည် L'Engle 2009), ဒါပေမယ့်လိင်ကိုလည်းညစ်ညမ်းလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သင်တန်းသားများ၏ 25.5% အားဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်တစ်စုံတစ်ဦးအကြောင်းကိုကူးယဉျ။ ဒီကယ့်ကိုညစ်ညမ်းတဲ့ပုံစံရှိမရှိအလွန်အမင်းဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းနှင့်နောက်ထပ်သုတေသနထိုကဲ့သို့သောစဉ်းစားတွေးခေါ်ကျယ်ပြန့်ပါလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်အခြားလူဦးရေအပေါ်လိုအပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအတွေ့ရှိချက်အချို့သည်ဖြစ်ကောင်းသင်တန်းသားများကို (နှင့်သူတို့လူကြီးမင်းအလေ့အကျင့်များမွတ်စ်လင် codes တွေကိုအားဖြင့်နေထိုင်ခဲ့ရှိမရှိ) ၏ဘာသာတရားကစုံစမ်းစစ်ဆေးမခံခဲ့ရပေမယ့်မွတ်စလင်တိုင်းပြည်တွင်နေထိုင်သင်တန်းသားများအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါသည်။ ရလဒ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အတွက်အလွန်အမင်းပျံ့နှံ့နေတဲ့ဖြစ်ခြင်းဘာသာရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများပေမယ့်လည်း, ထိုကဲ့သို့သောတန်ဖိုးများကိုညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကိုတားဆီးမအကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဒါဟာလိင်ပညာရေးအထက်တန်းကျောင်း၌ဆုံးမဩဝါဒနှင့်ညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုကြောင်းပညာရေးထိုကဲ့သို့သောပညာရေးကိုလျစ်လျူရှုထက်ဆှေးနှေးခဲ့သောခေါင်းစဉ်ဖြစ်သင့်ပုံကိုများအတွက်သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။
ဤပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု, ညစ်ညမ်းစားသုံးနေချိန်မှာပါဝင်သူများ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ထက်ဝက် masturbating အစီရင်ခံတွေ့ရှိခဲ့ယခင်ကနေဒါလေ့လာမှု (40%) (Boies ထက်လျော့နည်းသောအရာ 2002) ။ သည်အခြားလေ့လာမှုများ၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူအမျှပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုညစ်ညမ်းစားသုံးများအတွက်ဘုံအကြောင်းပြချက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွှတ်ပေးရန်နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, သိချင်စိတ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူမှုနှင့်စိတ်ကျေနပ်စရာစိတ်ကူးယဉ် (ဥပမာ Boies အဘို့အကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည် 2002; Merrick et al ။ 2013; ပေါလုနှင့်ရှိန်းပြား 2008) ။ ညစ်ညမ်းများအတွက်ဤ "ကောင်းသော" အကြောင်းပြချက်ကတော့ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု unsurprisingly ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့တူမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေမှာတော့လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းပွဲတစ်ပွဲ (အထိခိုက်မခံခြင်းနှင့်က hidden မညီကြောင်းအကြောင်းအရာများအဖြစ် Ahsan et al ကြည့်ရှုအားပေးကြသည်။ 2016) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုများအတွက်သင်တန်းသားများကိုဘာသာရေးအရနှင့်ယဉ်ကျေးမှုခေတ်မီဆန်းပြားသောဘာသာရေးယုံကြည်မှုများ, ကတိကဝတ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, ကိုယ်ကျင့်တရားထိုကဲ့သို့သောကထိုးစစ်နှင့်စော်ကားသောဖြစ်ခြင်းဘာသာရေးအခြေခံမူကိုချိုးဖောက်နှင့်အတူပဍိပက္ခအဖြစ် "မကောင်းတဲ့" ညစ်ညမ်းသည်အဘယ်ကြောင့်ရန်အဖြစ်၎င်းတို့၏အကြောင်းပြချက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုခဲ့ကြပေမည် သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတန်ဖိုးများ (ပက်တာနှင့်စျေး 2012) ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အမူအကျင့်နှင့်စပ်လျဉ်းတန်ဖိုးများသူတို့က, monogamous လက်ထပ်နှင့်လိင်ကွဲဆက်ဆံရေး (ပယ်ရီအတွင်းထွက်သယ်ဆောင်သင့်ကြောင်းဖြစ်ပါသည် 2017) ။ နောက်ထပ်သုတေသနအဘယ်အရာကိုတစ်တိုင်းပြည်များ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာတစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကနေမျှော်လင့်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်များအကြားပဋိပက္ခအပေါ်လိုအပ်သည်။
အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုလည်းပါဝင်သည်သောလူအမျိုးမျိုးရဲ့တစ်ဦးချင်းကျန်းမာရေးကိုဆန့်ကျင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး, နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး (ရေလွှမ်းမိုးအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် 2009; ရက်ကန်း III ကို et al ။ 2011), ဤများ၏သက်ရောက်မှုထိုကဲ့သို့သောတိုင်းပြည်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစာတတ်မြောက်ရေးအထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ထွန်းသစ်စလူကြီးများအကြားတွင်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျနည်းကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ သို့သော်အချို့လေ့လာမှုများကြောင့်ညစ်ညမ်းအသက်တာ၏အရည်အသွေးကိုလျော့ကျခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ကျား, မ (Hald နှင့် Malamuth ဆီသို့ဦးတည်ရင်းနှီးဖော်ရွေခြင်းနှင့်ရိုသေလေးစားမှုကိုရည်မှတ်အနုတ်လက္ခဏာသဘောထားလွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည်ဟုဆိုကြသည်ကြောင်းကိုလည်းမှတ်သားရပါမည် 2008; ပေါလုနှင့်ရှိန်းပြား 2008), ဆက်ဆံရေးအပေါ်အပျက်သဘောသက်ရောက်မှု (Maddox et al ။ 2011) နှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားချိုး-ups (ပေါလုနှင့်ရှိန်းပြားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ 2008) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတချို့ကသင်တန်းသားများကိုရှင်းလင်းစွာသမျှညစ်ညမ်းမစိတ်ဝင်စားမှုခဲ့, ဤကြောင့်ပါဝင်သူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဆက်ဆံရေးအပေါ်အလားအလာအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုရှိကြ၏ခံစားခဲ့ရအရာကိုခဲ့ကြပေမည်။ ဤသည် ပို. ပျံ့နှံ့နေတဲ့ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာအမျိုးသမီးသင်တန်းသားများအကြားခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းသားများကို, ဘာသာရေးစည်းကမ်းကိုအောက်ပါအလုပ်နှင့် / သို့မဟုတ်လေ့လာမှုနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံ, နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ gossiping အပါအဝင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုမှရှောင်ကြဉ်ဖို့ဘယ်လိုမှအဖြစ်အများအပြားအကြံပြုချက်များပေးခဲ့သည်။ ဒီတွေ့ရှိချက်များ၏သက်ရောက်မှုကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့အတွက် (အနည်းဆုံး) အကြံပြု, ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအချက်များမြင့်မားသောကျောင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များအတွက်အလားအလာရှိသောဆွေးနွေးမှုအကြောင်းအရာများအဖြစ်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုက၎င်း၏ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲယခုဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုဒီဇိုင်း Cross-Section ကြီးထို့ကြောင့်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်တစ်ခုအရိပ်အယောင်မပေးနိုငျသညျ။ ဒီကုစားနိုင်ရန်အတွက်, ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု longitudinal စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွက်အကဲဖြတ် variable တွေကိုအကြားကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးအကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။ နမူနာအရွယ်အစားလည်းကျိုးနွံခဲ့, နှင့်ဒေတာ Self-အစီရင်ခံစာ (နှင့်ထိုကဲ့သို့သောမှတ်ဉာဏ်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်လူမှုရေးလိုလားအဖြစ်လူသိများဘက်လိုက်မှုမှပွင့်လင်း) တို့ဖြစ်သည်။ ပွဲတစ်ပွဲကောင်းသောနေဆဲသူတွေကိုတစ်ဦးချင်းစီ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်သုံးပုံတစ်ပုံမပါဝင်နိုင်ခဲ့ဘူးချဉ်းကပ်ဆိုလိုနေစဉ်တုံ့ပြန်မှုနှုန်း (62.6%) ။ Non-ပါဝင်မှုများအတွက်အကြောင်းပြချက်မသိရပေမယ့်ဒီရလဒ်တွေကိုထိခိုက်နိုင်တယ်။ အနာဂတ်သုတေသနထို့ကြောင့်ပိုကြီးတဲ့နမူနာပါဝင်နှင့်ပါဝင်မှုနှုန်းကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ထို့အပြင်လက်ရှိလေ့လာမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၏မြို့တော်အနီးရှိသာတက္ကသိုလ်ကောက်ယူထို့ကြောင့်သည်အခြားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားနမူနာ (နှင့်လူဦးရေ၏အခြားအမျိုးအစားများ) တိုင်းပြည်အတွင်း (နှင့်အခြားနိုင်ငံများ) မှယေဘုယျန့်အသတ်ဖြစ်စေခြင်းငှါခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်အနာဂတ်သုတေသနဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပိုပြီးကိုယ်စားလှယ်နမူနာအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုညစ်ညမ်းစားသုံးမှုဆီသို့ဦးတည်သဘောထားအမြင်နှင့်သဘောထားများအလွန်ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုနှင့်ရမ်းနောက်ထပ်လေ့လာမှုမှာပဍိပက္ခနိုင်ကိုညွှန်းဝတ္ထုတွေ့ရှိချက်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်များ, သဘောထားအမြင်များနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုခန့်မှန်းအတွက်သဘောထားတွေအကြားအသင်းအဖွဲ့နှင့် ပတ်သက်. လက်ရှိသက်သေအထောက်အထားမှထည့်ပါ။ ဒါဟာအစမရှိသလောက်ညစ်ညမ်းနှင့်၎င်း၏စားသုံးမှု၏ခေါင်းစဉ်ကိုလေ့လာထားပြီးတဲ့တိုင်းပြည်ကနေဒေတာတွေကိုပေးပါသည်။ ရလဒ်များဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကျောင်းသားများကို၏ကြီးမားသောအချိုးအစားသာ monogamous နှင့်လိင်ကွဲလက်ထပ်ထိမ်းမြားအတှငျးရှိဖြစ်ခြင်းလိင်အပျေါမှာအများကြီးအလေးပေးလည်းမရှိသော်လည်းညစ်ညမ်းလောင်သော။ သရုပ်ပြ (ထိုကဲ့သို့သောကျေးလက်ဒေသဧရိယာကနေလာမယ့်ကဲ့သို့) လူမှု-လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်များပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့နှင့် / သို့မဟုတ်အလားတူဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုမှထူးခြားသောအချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုမှတပါး, ညစ်ညမ်းကောင်းမကောင်းနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. သဘောထားအမြင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုဆီသို့တစ်ဦးချင်းစီ '' စစ်မှန်သောသဘောထားများရှင်းလင်းဖို့နည်းနည်းလုပ်ပါ။ မကောင်းတဲ့အမှုအရာအများစုမှာကောင်းသောအရာတခုပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့် / သို့မဟုတ်လက်တွေ့ရှုထောင့်ကနေဖော်ပြထားခဲ့ကြပေမည်သော်လည်းနှငျ့ပတျသကျသောညစ်ညမ်းဖွယ်ရှိတစ်ဦး (လူမှုရေးအရနှစ်လိုဖွယ်), ဘာသာရေးကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုရှုထောင့်ကနေဖော်ပြထားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့် ပတ်သက်. (၎င်း၏ယုံကြည်ချက်နှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားအပါအဝင်) ကျား, မများနှင့်ဘာသာတရားနှစ်ခုလုံးကို၏အခန်းကဏ္ဍကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်နောက်ထပ်လေ့လာမှုလိုအပ်သည်။
စာရေးသူများသည်ဘွဲ့ကြိုသုတေသနအဖွဲ့၏သင်တန်းသားအဖွဲ့အားအဘူဘာကာကာဆစ်ဒစ်၊ Shahzabein Ritu နှင့် Ahsanul Mahbub Jubayar၊ ဒေတာစုဆောင်းခြင်းနှင့်ထည့်သွင်းခြင်းများပြုလုပ်ရာတွင်လိုအပ်သောအထောက်အပံ့များအတွက် Jahangirnagar တက္ကသိုလ်၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဌာန၊ Sahadat Hossain & Fatema Rahaman Mishu တို့ဖြစ်သည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ပညာပေး၏သုတေသနအဖွဲ့ရဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့ဦးစီးဌာန၏ Ethical ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကော်မတီကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
Ahsan, MS, Arafat, SMY, Ali, R. , Rahman, SMA, Ahmed, S. , & Rahman, MM (2016) ။ အရည်အချင်းပြည့်ဝသောလိင်ဆိုင်ရာသမိုင်း - ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရှိဆေးခန်းများအကြားစစ်တမ်းတစ်ခု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 1 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်(1),4။Google Scholar
အာရာဖတ်, SMY (2017) ။ Dhat syndrome ရောဂါ: ယဉ်ကျေးမှုခညျြနှောငျသီးခြားခွဲထွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ အပြုအမူကနျြးမာရေး,6၏ဂျာနယ်(3), 147-150 ။Google Scholar
Arafat, SMY, Majumder, MAA, Kabir, R. , Papadopoulos, K. , & Uddin, MS (2018) ။ ကျောင်းမှကျန်းမာရေးစာတတ်မြောက်မှု။ In တိုးတက်လာသောလက်တွေ့အလေ့အကျင့်များအတွက်ကျန်းမာရေးစာတတ်မြောက်ရေးပိုကောင်းအောင် (စစ။ 175-197) ။ Hershey: IGI ကို Global ။CrossRefGoogle Scholar
Bleakley, အေ, Hennessy, အမ်, & Fishbein, အမ် (2011) ။ သူတို့၏မီဒီယာရွေးချယ်မှုတွင်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေခြင်းပုံစံ။ လိင်သုတေသန 48 ၏ဂျာနယ်, 309-315 ။CrossRefGoogle Scholar
Boies, SC (2002) ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ '' ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးမှတုံ့ပြန်မှု: အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှ Links များ။ လူ့လိင်, 11 ၏ကနေဒါဂျာနယ်(2), 77-89 ။Google Scholar
Braithwaite, SR, Coulson, G. အ, Keddington, K. , & Fincham, FD (2015) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစာသားများနှင့်ကောလိပ်မှပေါ်ထွက်လာသောလူကြီးများကြားတွင်ချိတ်ဆက်ခြင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 44(1), 111-123 ။CrossRefGoogle Scholar
ဘရောင်း, JD, & L'Engle, KL (2009) ။ X-rated - အမေရိကန်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများ။ ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန 36(1), 129-151 ။CrossRefGoogle Scholar
Carroll, JS, Padilla-Walker, LM, Nelson, LJ, Olson, CD, McNamara Barry, C. , & Madsen, SD (2008) ။ မျိုးဆက် XXX - ထွန်းသစ်စလူကြီးများအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလက်ခံမှုနှင့်အသုံးပြုမှု။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သုတေသန 23 ၏ဂျာနယ်(1), 6-30 ။CrossRefGoogle Scholar
Chowdhury, MRHK, Chowdhury, MRK, Kabir, R. , Perera, NKP, & Kader, M. (2018) ။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများစွဲစွဲမှုကဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရှိပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏အပြုအမူပုံစံကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါသလား။ ကနျြးမာရေးသိပ္ပံအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်, 12(3), 67-74 ။PubMedPubMedCentralGoogle Scholar
Cooper က, အေ (1998) ။ လိင်နှင့်အင်တာနက်: သစ်ကိုထောင်စုနှစ်သို့ surfing ။ Cyberpsychology & အပြုအမူ၊(2), 187-193 ။CrossRefGoogle Scholar
Das, Am (2013) ။ porn နှင့်ထိတွေ့အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသား 80 ရာခိုင်နှုန်းကိုထက်ပိုလေ့လာမှုကဆိုပါတယ်။ အိန္ဒိယ Express ကိုဇူလိုင်လ 30 ။ မှရယူရန်: http://www.newindianexpress.com/states/kerala/2013/jul/30/More-than-80-percent-of-high-school-students-exposed-to-porn-says-study-501873.html။ 29 စက်တင်ဘာ 2018 ဝင်ရောက်။
Donevan, အမ်, & Mattebo, အမ် (2017) ။ မကြာခဏညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်း၊ အပြုအမူများနှင့်ဆွီဒင်နိုင်ငံရှိအထီးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမ ၀ င်စားမှုများအကြားဆက်နွယ်မှု။ လိင်နှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ၁၂, 82-87 ။CrossRefGoogle Scholar
ရေလွှမ်းမိုးခြင်း, အမ် (2007) ။ သြစတြေးလျအတွက်လူငယ်များအကြားညစ်ညမ်းမှ exposure ။ လူမှုဗေဒ, 43 ၏ဂျာနယ်(1), 45-60 ။CrossRefGoogle Scholar
ရေလွှမ်းမိုးခြင်း, အမ် (2009) ။ ကလေးများနှင့်လူငယ်များကြားတွင်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုများ၏ပျက်ဆီး။ ကလေးသူငယ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 18 အလွဲသုံးစားပြုမှု(6), 384-400 ။CrossRefGoogle Scholar
Goodson, P. , McCormick,,, & အီဗန်, အေ (2001) ။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသည့်ပစ္စည်းများရှာဖွေခြင်း - ကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏အပြုအမူနှင့်သဘောထားများကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 30(2), 101-118 ။CrossRefGoogle Scholar
Griffiths က, MD (2000) ။ အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှု: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ, 3, 537-552 ။CrossRefGoogle Scholar
Griffiths က, MD (2001) ။ အင်တာနက်အပေါ်လိင်: လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်လိင်စွဲလမ်းများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ လိင်သုတေသန 38 ၏ဂျာနယ်, 333-342 ။CrossRefGoogle Scholar
Griffiths က, MD (2012) ။ အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲ: ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ စွဲသုတေသန & သီအိုရီ, 20(2), 111-124 ။CrossRefGoogle Scholar
Häggström-Nordin, အီး, Sandberg, ဂျေ, Hanson, U. , & Tydén, တီ (2006) ။ နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်! ' ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် ပတ်သက်၍ လူငယ်ဆွီဒင်လူငယ်များ၏အတွေးများနှင့်ထင်မြင်ချက်များ။ ဂရုစိုကျသိပ္ပံစကင်ဒီနေးဂျာနယ်, 20(4), 386-393 ။CrossRefGoogle Scholar
Hald, GM, & Malamuth, nm (2008) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှု၏မိမိကိုယ်ကိုမြင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 37(4), 614-625 ။CrossRefGoogle Scholar
Huey, CJ, Kline-Graber, G. , & Graber, B. (1981) ။ အချိန်အချက်များနှင့်အော်ဂဇင်တုံ့ပြန်မှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 10(2), 111-118 ။CrossRefGoogle Scholar
L'Engle, KL, Brown, JD, & Kenneavy, K. (2006) ။ မီဒီယာသည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အရေးကြီးသောအခြေအနေဖြစ်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး, 38 ၏ဂျာနယ်(3), 186-192 ။CrossRefGoogle Scholar
Lim, MSC, Agius, PA, Carrotte, ER, Vella, AM, & Hellard, ME (2017) ။ သြစတြေးလျလူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်ဂျာနယ်, 41(4), 438-443 ။CrossRefGoogle Scholar
Lo, V.-H. , & ဝေ, R. (2005) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိုင်ဝမ်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း။ အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာဂျာနယ်၊ ၄၉(2), 221-237 ။CrossRefGoogle Scholar
Lo, V. , Neilan, အီး, Sun က, အမ်, & Chiang, အက်စ် (1999) ။ ထိုင်ဝမ်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ ဆက်သွယ်ရေး,9၏အာရှဂျာနယ်(1), 50-71 ။CrossRefGoogle Scholar
Maddox, AM, Rhoades, GK, & Markman, HJ (၂၀၁၁) ။ တစ် ဦး တည်းသို့မဟုတ်အတူတကွလိင် - ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းများကြည့်ရှုခြင်း: ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့များ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 40(2), 441-448 ။CrossRefGoogle Scholar
Malamuth, မိုင် (2001) ။ အပြာစာပေ။ NJ Smelser & PB Baltes (Eds ။ ) တွင် လူမှုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစွယ်စုံကျမ်းနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသိပ္ပံ (Vol ။ 17, စစ။ 11816-11821) ။ အမ်စတာဒမ်: Elsevier ။CrossRefGoogle Scholar
Mattebo, အမ်, Larsson, အမ်, Tydén, တီ, & Häggström-Nordin, အီး (2014) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရှင်များ၏သဘောထားအမြင်ဆွီဒင်ဆယ်ကျော်သက်များ။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသူနာပြု, 31(3), 196-205 ။CrossRefGoogle Scholar
Merrick, ဂျေ, Tenenbaum, အေ, & Omar, HA (2013) ။ လူ့လိင်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး, 1 အတွက်နယ်စပ်ဒေသ, 41 ။PubMedPubMedCentralGoogle Scholar
မော်ဂန်, EM (2011) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဦးစားပေး, အပြုအမူနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှု၏ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက် '' အသုံးပြုမှုအကြားအသင်းအဖွဲ့များ။ လိင်သုတေသန 48 ၏ဂျာနယ်(6), 520-530 ။CrossRefGoogle Scholar
Mosher, DL (1988) ။ ညစ်ညမ်းသတ်မှတ်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဝင်ပတ်သက်မှုသီအိုရီ, ဇာတ်ကြောင်းအခြေအနေတွင်နှင့်ကောင်းမြတ်ခြင်းကို-of-မထိုက်မတန်။ စိတ်ပညာနှင့်လူ့လိင်၏ဂျာနယ်, 1(1), 67-85 ။CrossRefGoogle Scholar
Owens, EW, Behun, RJ, Manning, JC, & Reid, RC (၂၀၁၂) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏ဆယ်ကျော်သက်များအပေါ်သက်ရောက်မှု - သုတေသနကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ လိင်အကျင့်စွဲခြင်း၊(1-2), 99-122 ။CrossRefGoogle Scholar
ပက်တာ, R. , & စျေး, ဂျေ (2012) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ ဘာသာတရားနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကွာဟမှု - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်တက်ကြွသောဘာသာရေးကိုကွဲပြားစွာသက်ရောက်သလား။ ဘာသာတရား၏သိပ္ပံလေ့လာဘို့ဂျာနယ်, 51(1), 79-89 ။CrossRefGoogle Scholar
ရှင်ပေါလု, ခ, & ရှိန်း, JW (2008) ။ လိင်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများနှင့်အင်တာနက်အပြာစာပေရုပ်ပုံများအတွက်လှုံ့ဆော်မှုများ။ လိင်ကျန်းမာရေးအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်, 20(3), 187-199 ။CrossRefGoogle Scholar
ပယ်ရီ, SL (2015) ။ ဘာသာရေးလူမှုဆက်ဆံရေးတစ်ခုခြိမ်းခြောက်မှုအဖြစ်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု။ ဘာသာရေး, 76 ၏လူမှုဗေဒ(4), 436-458 ။Google Scholar
ပယ်ရီ, SL (2016) ။ မကောင်းတဲ့အနေဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားသလော ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု, ဇနီးယောင်္ကျားစျယာနျဘာသာတရားကို, ကျား, မ, နှင့်အိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေးကို။ လူမှုဗေဒဆိုင်ရာဖိုရမ်, 31, 441-464 ။CrossRefGoogle Scholar
ပယ်ရီ, SL (2017) ။ ဇနီးယောင်္ကျားစျယာနျဘာသာတရားကို, ဘာသာရေးစဘွန်းနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 46(2), 561-574 ။CrossRefGoogle Scholar
ပတေရုသ, ဂျေ, & Valkenburg, pm တွင် (2006) ။ ဆယ်ကျော်သက်များအင်တာနက်ပေါ်တွင်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန 33(2), 178-204 ။CrossRefGoogle Scholar
Poulsen, FO, Busby, DM, & Galovan, AM (၂၀၁၃) ။ အပြာစာပေအသုံးပြုမှု။ ၎င်းကိုမည်သူအသုံးပြုသည်၊ ၎င်းသည်စုံတွဲ၏ရလဒ်များနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်သည်။ လိင်သုတေသန 50 ၏ဂျာနယ်(1), 72-83 ။CrossRefGoogle Scholar
Regnerus, အမ်, ဂေါ်ဒွန်, D. , & စျေး, ဂျေ (2016) ။ အမေရိကရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း - နည်းစနစ်ဆိုင်ရာနည်းလမ်းများကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း။ လိင်သုတေသန 53 ၏ဂျာနယ်(7), 873-881 ။CrossRefGoogle Scholar
Rissel, C တို့, ရစ်ချတာ, ဂျေ, de Visser, RO, McKee, အေ, Yeung, အေ, & Caruana, တီ (2017) ။ သြစတြေးလျရှိအပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုသူများ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်း - ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဒုတိယofစတြေးလျလေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်များ။ လိင်သုတေသန 54 ၏ဂျာနယ်(2), 227-240 ။CrossRefGoogle Scholar
Shaughnessy, K. , Byers, ES, & Walsh, L. (2011) ။ လိင်ကွဲကျောင်းသားများ၏အွန်လိုင်းလိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ - ကျား၊ မတူညီမှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 40(2), 419-427 ။CrossRefGoogle Scholar
Shek, DTL, & Ma, CMS (2012) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုဟောင်ကောင်ရှိအစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များအကြားတွင်အသုံးပြုခြင်း - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်လူမှုရေးဆက်နွယ်မှုများ။ မသန်စွမ်းသူများနှင့်လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအပေါ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 11(2), 143-150 ။Google Scholar
Shek, DTL, & Ma, CMS (2016) ။ ဟောင်ကောင်ရှိတရုတ်မြီးကောင်ပေါက်များတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုခြောက်နှစ်တာလေ့လာမှု။ ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မီးယပ်, 29 ၏ဂျာနယ်(1), S12-S21 ။CrossRefGoogle Scholar
က Short, MB, Black က, အယ်လ်, စမစ်, AH, Wetterneck, မှန် CT, & ဝဲလ်, DE (2012) ။ အင်တာနက်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းမှသုတေသန - အသုံးပြုသောနည်းလမ်းများနှင့်လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကအကြောင်းအရာ။ Cyberpsychology, အပြုအမူနှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့, 15(1), 13-23 ။CrossRefGoogle Scholar
Sørensen, အေဒီ & Kjørholt, VS (2007) ။ ဘယ်လို Nordic မြီးကောင်ပေါက်ညစ်ညမ်းဆက်စပ်သလဲ? တစ်ဦးကအရေအတွက်လေ့လာမှု။ ခုနှစ်တွင်: မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ P ကို? လူငယ်, ကျား, မများနှင့်ညစ်ညမ်း (စစ။ 87-102) ။ ကိုပင်ဟေဂင်: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်းများ၏ဒိန်းမတ်ကျောင်း။Google Scholar
Weaver III, JB, Weaver, SS, Mays, D. , Hopkins, GL, Kannenberg, W. , & McBride, D. (2011) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးညွှန်းကိန်းများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာသည်အရွယ်ရောက်သူများ၏ပြုမူပုံကိုအသုံးပြုသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 8(3), 764-772 ။CrossRefGoogle Scholar